(Waxaa laga soo toosiyay Carbon)
Garafayt (bidix) iyo dheeman (midig) labo sinji oo caarboo
Sinjiyo: garafayt, dheeman iyo kuwo kale
Qaab: Garafayt : madowdheeman: dhalaalsan
Kaarboonku markuu la mataanoowo curiye kale falgalkaas waxaa ka soo baxa macdan aad u qaali ah, sida isku dhiska dheemanta, graphite-ka iyo amorphous.
Kaarboon (Ingiriis: Carbon) waa curiye kimikeed oo astaankiisu yahay C tiro atameedkiisuna yahay 6. Waa Birma-ahe afar-kaaftoome ah— adeegsadana afar elektoroon si uu u sameeyo dabarwadaag kimikeed. Wuxuu ka mid yahay tusaha kalgalka ururkiisa 14-aad. Saddex aysatoob waxay u dhacaan si dabiici ah, 12C iyo 13C waa deganyihiin meesha uu 14C uu yahay Raadiyo-bu'le (Radionuclide), kuna mataataxa cimri-badh da'diisu tahay 5,730 sano. Kaarboonku waa mid ka mid ah curiye-yashii la ogaa waayadii hore.
Kaarboonku waa curiya 15aad ee ugu badan kuwa dhulka ogadiisa laga helo, waana kan 4-aad ee ugu badan dhanka cufka markii la eego koonka kadib haydarojiin, Hiiliyam iyo ogsajiin.
Kaarboonku markuu la mataanoowo curiye kale waxaa soo baxa macdan aad u qaali ah, sida isku dhiska dheemanta, graphite-ka iyo amorphous.
1 Taariikhda Kaarboonka
2 Atomka Kaarboonka
3 Fal-galka Kaarboonka
4 Isticmaalka Kaarboonka
Noocyada ugu badan ee Kaarboon ee naqaano waxaa ka mid ah kuwa sida dabiiciga ah looga helo oogada dhulka sida Nuurada, Dhuxul Dhagaxa, Saliida dhulka. Maadaama Kaarboonku la fal-galo curiyeyaal badan, waxaa aad u badan Isku-dhisyada (compounds) uu leeyahay oo waa curiyaha ugu isku-dhiska badan dhamaan. Sidoo kale kaarboonku waa curiyaha toban-iyo-shanaad ee ugu badan, iyo midka afaraad ee ugu cufka weyn leh.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaarboon&oldid=195450"